စကာင်္ပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Westlife ဖျော်ဖြေပွဲကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
စကာင်္ပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Westlife ဖျော်ဖြေပွဲကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ပုံရိပ်….
August 14, 2019071
ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဖိုတိုမော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ခရီးထွက်တာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေတစ်ဆင့် ဓါတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Nwe Nwe Tun fb
နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ စကာင်္ပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Westlife ဖော်ျဖြေပွဲကိုလည်း သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုကိုနဲ့တူတူကြည့်ချင်တာ” လို့ရေးထားပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖစဘြေုတပြေါကြနတစေဆြငြ့ ပရိသတတြှကှေားမှာ လူသိမွားလာတဲ့သူတစယြောကဖြှစတြဲ့ နှယနြှယထြှနြးကတော့ ဖိုတိုမောဒြယတြစယြောကအြဖှစနြဲ့ အနုပညာလှုပရြှားမှုတှကေို ပှုလုပနြတေဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ နှယနြှယထြှနြးကတော့ ခရီးထှကတြာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတစယြောကဖြှစပြှီး ဖစေ့ဘြုတကြနတစေဆြငြ့ ဓါတပြုံတှကေို မွှဝပေေးလရှေိ့တဲ့သူလညြးဖှစပြါတယြ။
နှယနြှယထြှနြးကတော့ စကာငျြပူနိုငငြံမှာ ပှုလုပကြငြွးပခဲ့တဲ့ Westlife ဖွောဖြှပှေဲကိုလညြး သူမရဲ့ သူငယခြငြွးတှနေဲ့အတူ သှားရောကကြှညြ့ရှုခဲ့ကှတာဖှစပြါတယြ။ “ကိုကိုနဲ့တူတူကှညြ့ခငွတြာ” လို့ရေးထားပှီး ဓါတပြုံတှကေို မွှဝပေေးထားတာဖှစပြါတယြ။